Ngathi-u-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. ise kumazantsi elikomkhulu Beijing, emantla Jinan, kunye lula amanzi kunye nokuthuthwa komhlaba. Lishishini lobuchwephesha elivelisa oomatshini bebhokisi kunye noomatshini bokushicilela besikali esikhulu. Inkampani inezixhobo ezizalisekisiweyo zoomatshini, inqanaba eliphezulu lobungcali, amava okuvelisa asemagqabini, ukomelela kwezobuchwephesha, iindlela eziphambili zovavanyo, inkqubo yolawulo epheleleyo, kwaye ipasile i-ISO9001: 2000 isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe (inombolo yobhaliso: 03605Q10355ROS) Yinkwenkwezi ekhulayo kushishino China oomatshini yoshicilelo ibhokisi.
Iimveliso zenkampani yethu iimodeli ezininzi zoomatshini kunye neenkcukacha, ezinokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abahlukeneyo. Ngomoya "ukugqwesa" kunye "okukhethekileyo", inkampani yethu ikhuthaza ngenkuthalo ulawulo lomgangatho olubanzi. Iimveliso ezivelisiweyo zinconywa kakhulu ngabasebenzisi kwihlabathi liphela ngenkangeleko yabo entle, ubungcibi bokusebenza ngobuchule, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa.
Inkampani ineminyaka engaphezulu kwama-30 ye-R & D kunye namava okuvelisa, inkampani ibambelele "kuqinisekiso lomgangatho, kugxilwe kwinkonzo, kugxile kubathengi", kunye netekhnoloji ephezulu, ulwazi lobungcali kunye nolawulo lwekhompyuter iR & D kunye nokuveliswa izixhobo zokwenza imveliso zebhodi. Ngokusekwe ngoku, sijonge kwikamva, xa sijongana nenkqubela phambili yangoku koomatshini beebhokisi, siya kuthi sisebenzisane ngentshiseko epheleleyo, someleze ulawulo lwangaphakathi, sandise intengiso, sandise uphando lwezenzululwazi, siphuhlise iintlobo zeemveliso ezintsha, kwaye siphucule esele ikho iimveliso. Izalathi zentsebenzo, kwaye uzabalazela ukufezekisa umgangatho ophezulu kunye neemveliso zexabiso eliphantsi kunye nenkonzo ebanzi emva kokuthengisa ukuze ukwenze ngokuqinisekileyo u-100, ukwaneliseka kwewaka, ukufezekisa impumelelo yethu!